Companieslọ ọrụ China na-eduzi ngwa patent 5G zuru ụwa ọnụ | Gam akporosis
Nkwupụta sitere na IPlytics, ụlọ ọrụ ikike ikikere data nyere ikike, gosipụtara nke ahụ Techlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ China na-eduga ngwa ngwa 5G ngwa ngwa, na Huawei na ọnọdụ mbụ.
Organizationslọ ọrụ ndị China gafere nchịkọta nke ọtụtụ 5G Patent and Standards application na usoro dabara na njedebe nke Eprel, na-aza ajụjụ maka 34% nke ngụkọta ụwa, na-egosi ihe ọmụma.
Na nkọwa, Nnukwu ụlọ ọrụ China nke Huawei rụrụ ọrụ dị ukwuu, site n'ikwu na 15% nke ụkpụrụ ọkọlọtọ dị mkpa.
Huawei na-eduzi ogo nke ụlọ ọrụ na -emepụta ngwa ikikere 5G zuru ụwa ọnụ
Ihe Nlereanya Dị Mkpa (5G SEP) bụ mmanye ikike na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-eji mgbe emejuputa ikikere teknụzụ 5G. Na-enweghị ha, ha agaghị enwe ike ịmepụta usoro ha ma ọ bụ netwọkụ nkwukọrịta nke teknụzụ a.
Mmadụ atọ n'ime ndị dike China ghọrọ otu n'ime 10 kacha emepụta ikike ikikere 5G SEP, ya na Huawei na - eduga ngwugwu niile. Lọ ọrụ China bụ ZET Corp na China Academy of Telecommunications Technology bịara nke ise na nke itoolu, n'otu n'otu. Chineselọ ọrụ China ọzọ na ndepụta ahụ bụ Guangdong OPPO Mobile Telecommunication Corp, yana 207 5G SEPs.
Ihe ọzọ dị mkpa na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ bụ doro anya teknụzụ 5G. Ọsọ kasị sie ike bụ n'etiti China na United States, onye ga-ebu ụzọ mejuputa teknụzụ ahụ, n'agbanyeghị eziokwu na mba ole na ole ndị ọzọ, dị ka South Korea, emeworị ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị na mpaghara ha niile.
Germany ga-ekwe ka Huawei guzobe 5G akụrụngwa ya na mba ahụ
Site n'echiche nke ihe, China nwere uru ma kwụọ ụgwọ iji mejuputa netwọk 5G ya na Q2019 XNUMX. Agbanyeghị, a ka na-anwale teknụzụ na mba abụọ ahụ, yabụ na ọ nweghị azụmaahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Site na Huawei n'isi, ụlọ ọrụ ndị China na-eduzi ngwa ikikere 5G zuru ụwa ọnụ
Kedu ihe eji eme ụlọ dị mma ma ọ bụrụ na ụlọ (ihe owuwu) nke ị na-arị elu abụghị nke gị.
A ga-ekwuputa ụbọchị mgbapụta nke Galaxy Fold